यी ७ व्यक्तिलाई झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् नमस्कार, नत्र हुनुपर्ला लज्जित ! – Online Khabar 24
यी ७ व्यक्तिलाई झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् नमस्कार, नत्र हुनुपर्ला लज्जित !
काठमाडौँ । हामीले आफूभन्दा सम्मानित मानिसलाई नमस्कार गर्दछौ । सामान्यतया नमस्कार सम्मानको सूचक हो।
हिन्दू धर्म अनुसार नमस्कारको महत्व व्यापक छ। भगवानलाई पूजा गर्दा समेत नमस्कार अनिवार्य रुपमा गरिन्छ । यसकारण नमस्कारले केही न केही अर्थ राख्दछ।
टाढा रहेको व्यक्ति : आफूबाट केही टाढा रहेको व्यक्ति जसले आफूले गरेको नमस्कार नदेख्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगर्नु राम्रो। किनकी उसले नमस्कार नगरेको खण्डमा नदेखेर नमस्कारको कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा नराम्रो लाग्न सक्छ। साभार गरियको खबर ।
Prevअाज केहि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले अवश्य जान्नुस अाजको तपाँर्इको भाग्यफल !
nextयी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित)